Cholesterol zingcwecwe: nendlela yokuzigwema ukuze zingasivimbi ukuthuthukiswa isifo sokuqina kwemithambo yegazi?
Okwamanje, uma kukhona ukudla okuningi ezintsha zokwenziwa kanye zokupheka ezintsha ezingapheli zingayilimaza impilo yomuntu, ikakhulukazi, kungase kubonakale cholesterol zingcwecwe - ngokweqile imali kwi izindonga imithambo yegazi. Ngomqondo onabile, inkulumo izizathu ezibangela kumiswa cholesterol zingcwecwe, impela eningi. Omunye wabo - i ekudleni, ngokukhethekile, ukusetshenziswa ukudla okunamafutha, ngibhema, efakwé usawoti, nemikhiqizo yobisi. Ngaphezu kwalokho, ukudla okunamafutha kubangela ukulimala kwezitho ezingaphakathi, abaningi, hhayi nje isibindi.
Ngokuvamile, i-cholesterol zingcwecwe kuholele iqiniso lokuthi permeability ka imithambo yegazi okuphukile kukhona isifo sokuqina kwemithambo yegazi. Njengoba igazi ukhiphela kancane ophakamayo anda blood pressure, kwehle ikhono ukusebenza futhi ziwohloka kakhulu inkumbulo. Ngaphezu kwalokho, ziyancipha amandla amaseli, ngoba uqale zihlupheka ngenxa yokuntuleka umoya-mpilo.
Ngaphezu amandla, omunye kwezimbangela eziyinhloko atherosclerosis yilezi:
Ukubhema kanye ukusetshenziswa uphuzo oludakayo.
Livela kwezimiso ukucindezeleka nokucindezeleka sezinzwa.
Njengoba isimo sempilo, cholesterol zingcwecwe akhiwa kaningi amadoda aneminyaka engaphezu kwengu-35 ubudala abaphinde babophezeleke ngaphansi kokucindezeleka.
Kodwa khumbula ukuthi lapho kumiswa i-cholesterol zingcwecwe kuncike ngokuphelele mayelana nokudla kahle yokuphila. Ngakho-ke, musa ukufuna ungamandla angaphezu kwavamile, futhi zinakekele kakade kusukela esemncane. Kunezindlela eziningana izimpawu ezibonisa amazinga anda cholesterol:
ingcindezi ezesabisa lehla phezulu.
A nezinga eliphezulu kakhulu ikhanda.
Ukuba khona inzululwane.
Rapid ishayela noma inhliziyo palpitations.
Ukucanuzela kwenhliziyo, okuyinto babe ngaphandle kwesizathu.
Kwezinso esibindini futhi ukudla okunamafutha enyanya.
Ngokuvamile kukhona cholesterol zingcwecwe ku Isivalo, ukwelapha ehlinzekwe ngenkathi op kuphela. Ngokuvamile, original kufanele baxoxe isazi, ngubani kumelwe uhlole wena ukudla okunempilo. Kamuva, uma kungekho contraindications, lezi zingcwecwe namhlanje isuswe ngempela ngempumelelo nge laser. Lokhu ephephile futhi evumelana.
Ngakho, i-cholesterol zingcwecwe, ekwelapheni okubandakanya, okokuqala kunakho konke, ukudla ezikhethekile, kungcono ukuqala kusenesikhathi ukuvimbela ukuthuthukiswa isifo sokuqina kwemithambo yegazi. Ucwaningo lubonisa ukuthi cishe u-70% abantu abadala lamazwe post-Soviet abadinga imishanguzo wezokudla yalesi sifo.
Ukudla kulokhu kuhilela ukusetshenziswa imali ethe ukudla isitshalo futhi izivimbelo kanyekanye ne cholesterol aphezulu ukudla ukutholakala (okunamafutha inyama, ubisi, amaqanda, izinhlanzi Roe, isibindi namasoseji, njll). Ngaphezu kwalokho, ukwenqaba imikhiqizo enjalo noma umkhawulo inombolo yabo ekudleni Kunconywa esemncane lapho cholesterol Awekho izinkinga.
Akekho uthi udinga ukwenza ukuba bangayeki inyama. Vele izinhlobo amafutha kufanele kufakwe ephansi fat (yenkomo, inkukhu), okuzokwenza kakhulu inciphise amafutha yokuqothulwa.
Futhi, uma une-plaque cholesterol, uthuthukisa Ukudla yakho yoqobo nemifino okugazingiwe, nidle isidingo sabo, kulapho ngokuvamile zibe ngcono. Kufanele kube nomkhawulo kusawoti.
Angaphansi kwemithetho yokudla ngenhla kungavimbela ukuthuthukiswa isifo sokuqina kwemithambo yegazi. Kuphela kufanele kwenziwe ngesikhathi! Hlale ukhumbula lokhu futhi njalo ukubukela impilo yakho!
Ukwelashwa vulvitis e abesifazane namantombazane
Izingane Functional sika ifenisha: esifubeni zangaphansi elinethebula ekushintsheni
Indlela yokusebenzisa "clotrimazole" amakhandlela ngesikhathi sokukhulelwa